Infinity Cargo - Bangkok Cargo, 567/456 Watergate Pavilion Building, 2nd Floor, Ratchaprarop Road, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Bangkok (2021)
หน้าหลัก > ประเทศไทย > Bangkok > บริการขนส่ง > Infinity Cargo - Bangkok Cargo
Infinity Cargo - Bangkok Cargo
511 Soi 6, Sri Ayutthaya Road, Ratchathewi
1041/29 ซ. นายเลิศ ถ. เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน
Xuan Xu Experiences
Pratunam near Baiyok 1 and 2, Ratchathewi Road,
Pim pimary 50-100
J-Star cargo service Bangkok to myanmar and myanmar to Bangkok
Juldis tower 21/14 Petchaburi soi 19 payathai payathai,Rachatvee,Bangkok 10400
Office 25.01 Level 25, 127 Gaysorn Tower, Ratchadamri Road, Pathumwan
(Bangkok to Myanmar) ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံ ပို့ဆောင်ရေး
- ဘန်ကောက်မှရန်ကုန်/ မန္တလေးနှင့်အခြားမြို့ကြီးများသို့၊ကုန်ပစ္စည်းများအားအိမ်အရောက် ဝန်ဆောင်ပေးခြင်း
- ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သယ်ယူပို့ဆောင်လိုပါက INFINITY Cargo ကိုသာဆက်သွယ်လိုက်ပါ
Infinity Cargo မှရနိုင်သောဝန်ဆောင်မှုများ
အထည်လိပ် ပိတ်လိပ် ပိတ်အုပ်များ
ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအား ဝယ်ယူပေးခြင်း Lazada - Shopee - Watsons - IKEA Store
မှလဲဝယ်ယူပေးနေပါပြီ Wholesale အတွက်သာ (အဝယ်တော် Service)
ရန်ကုန်မြို့ ရှိ customer များအတွက် အိမ်တိုင်ရာရောက် ဆိုင်တိုင်ရာရောက် ပို့ဆောင်ပေးနေပါသည်။
Phone: 09 31836007
Viber: +959795818143 /
Line: +959795818143 /+66 93 183 6007
ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအား ဝယ်ယူပေးခြင်း Lazada - Shopee - Watsons - IKEA Store မှလဲဝယ်ယူပေးနေပါပြီ (အဝယ်တော် Service)
ရန်ကုန်မြို့ ရွိ customer များအတွက် အိမ်တိုင်ရာရောက် ဆိုင်တိုင်ရာရောက် ပို့ဆောင်ပေးနေပါသည်။
Line: +959795818143 /
+66 93 183 6007
outlet brand မျိုးစုံ
Central စတဲ့ app တွေကတဆင့် ဝယ်ယူပေးတဲ့အပြင်အဝယ်တော် service နှင့် မိတ်ဖက်များဖြစ်ကြတဲ့
#လူကြီးအဝတ်အထည် လက်ကား(china /Bkk) စက်ရုံတိုက်ရိုက်
#ဆေးရုံသုံးလက်အိတ် အဖြူ/အပြာ စက်ရုံတိုက်ရိုက်
#promotion သုံးထီးနှင့် POSM item များ
#Promotion Events များအတွက် အလှဆင် decoration ပစ္စည်းများ ကိုလည်းဝယ်ယူပေးပါသည်
Cargo ရောက်ပြီးကြာချိန် တပတ်အတွင်းရမှာထြစ်ပါတယ်
၃သိန်းအောက် - ၃သောင်းကျပ် + Cargo ခ
၃သိန်မှ ၁၀သိန်း- ၈% + Cargo ခ
၁၀သိန်းအထက်- ၅% + Cargo ခ
သေသပ်ပြီး ရေမစို မပြဲအောင် စက္ကူဖာ/ပီနံအိန်များနဲ့သေချာထုပ်ပိုးပေးတာမို့ ပျောက်ရှတာမျိုးမဖြစ်အောင် 100% တာဝန်ယူပို့ဆောင်ပေးပါတယ်
A wal tor -Supply Goods
INFINITY CARGO မှ ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး မှာလိုသော customers များ ဒီပေ့ တွင်တိုက်ရိုက်မှာယူနိုင်ပါပြီ။
Door To Door BKK & China Supplier Service
(၅-၁၁-၂၀၂၀ ရက်၊ နေပြည်တော်)
၂။ ထိုသို့ဆွေးနွေးရာတွင် နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်များက နှစ်နိုင်ငံအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်လက်တိုးမြှင့်သွားရေး၊ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား အများစုနေထိုင်သည့် ပြည်နယ်တစ်ခုတွင် တရားဝင် ကောင်စစ်ဝန်ရုံးဖွင့်လှစ်ပေး၍ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရေး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ၏ အခက်အခဲများအား ကူညီပံ့ပိုး ဖြေရှင်းပေးရေး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးတွင် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ် ကုန်သွယ်မှု ပိုမိုမြှင့်တင်ရေး၊ ပြည်သူများအကြား ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု ပိုမိုမြှင့်တင်ရေးအတွက် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဂိတ်များ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ရေးနှင့် နယ်စပ်ဒေသတစ်လျှောက် လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဧရာဝတီစင်တာအတွက် ဦးမင်းနိုင် + ဒေါ်စန်းစန်းထွေး မိသားစု Infinity Cargo Bangkok က Face Shield ( 500 pcs ) လှူဒါန်း
ဧရာဝတီ ဖောင်ဒေးရှင်းက အဓိက ပံ့ပိုးကူညီ ဦးဆောင်မှုဖြင့် COVID -19 လူနာများကို လက်ခံကုသပေးမည့် ဧရာဝတီ စင်တာအတွက် ဦးမင်းနိုင် + ဒေါ်စန်းစန်းထွေး မိသားစု Infinity Cargo Bangkok က Face Shield ( 500 pcs ) ကို စေတနာ ထက်သန်စွာဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီ လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါသည်။
Bangkok Pre-Order 100%
Infinity Cargo - Bangkok Cargo's cover photo
မှလဲဝယ်ယူ​​ပေးနေပါပြီ Wholesale အတွက်သာ (အဝယ်တော် Service)
Viber : +66931836007
- ဘန္ေကာက္မွရန္ကုန္/ မႏၱေလးႏွင့္အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔၊ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားအိမ္အေရာက္ ဝန္ေဆာင္ေပးျခင္း
- ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္လိုပါက INFINITY Cargo ကိုသာဆက္သြယ္လိုက္ပါ
Infinity Cargo မွရနိုင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အထည္လိပ္ ပိတ္လိပ္ ပိတ္အုပ္မ်ား
ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအား ဝယ္ယူေပးျခင္း Lazada - Shopee - Watsons - IKEA Store မွလဲဝယ္ယူေပးေနပါၿပီ (အဝယ္ေတာ္ Service)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ customer မ်ားအတြက္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ဆိုင္တိုင္ရာေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါသည္။
တထည် 100 -baht
09 20371258, 09 26717929
Viber : 959 252719031).
Viber : 959 252719031)
Face shield ရပါပြီ
Wholesale လိုသူများ ဆက်သွယ်ပါ
- ท่านสามารถส่งสินค้าจาก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง/มัณฑะเลย์หรือเมืองอื่นๆได้โดยที่ทางเราจะดูแลรักษาสินค้าของท่านเป็นอย่างดีและจะจัดส่งให้ถึงที่หมายตามที่ลูกค้าต้องการ
ต้องการขนส่งที่ดีและไว้วางใจได้ ติดต่อ INFINITY CARGO
🥡 အထည်လိပ် ပိတ်လိပ် ပိတ်အုပ်များ
🥡 လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး (အဝတ်လျှော်စက် , Tv )
🥡 လူသုံးကုန် အလှကုန်ပစ္စည်းများ
💁🏼‍♀️ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအား ဝယ်ယူပေးခြင်း( အဝယ်တော် Service)
ရန်ကုန်မြို့ ရှိ customer များအတွက် အိမ်တိုင်ရာရောက် ဆိုင်တိုင်ရာရောက် delivery 🚚 service ရှိခြင်း)
Mira Cosmetic Thailand
Bangkok INFINITY CARGO
We are loading now!!!
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ယုံကြည်စွာအပ်နှံ အားပေးမှုကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်
စီးပွါးများ ဒီရေအလား တိုးတက်ကြပါစေ ❤️❤️
No.8, Soi Petchburi 13
Phayathai, Rachathewl Bangkok
Metro resort pratunam နှင့်
Southerner TV News
ျမန္မာ- ထိုင္း နယ္စပ္ဂိတ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္႔ ေမာေတာင္ၿမိဳ႕ ေတာင္ေျခရွိ ဆင္ခြန္းဂိတ္အား အၿမဲတမ္းဂိတ္အျဖစ္ ဖြင္႔လွစ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ထိုင္းအသံအမတ္ႀကီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးခဲ႔ပါတယ္။
Infinity Cargo မွရႏိုင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
🥡 အထည္လိပ္ ပိတ္လိပ္ ပိတ္အုပ္မ်ား
🥡 လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး (အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ , Tv )
🥡 လူသံုးကုန္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား
💁🏼‍♀️ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအား ဝယ္ယူေပးျခင္း( အဝယ္ေတာ္ Service)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ customer မ်ားအတြက္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ဆိုင္တိုင္ရာေရာက္ delivery 🚚 service ရွိျခင္း)
Metro resort pratunam ႏွင့္
Viber : 959 252719031
Wholesale ဝယ္ယူလိုသူမ်ား , OS မ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္း
INFINITY Cargo မွ
made in thailand (2019) အေႏြးထည္မ်ား order တင္ႏိုင္ပါၿပီ
Phone: 09 31836007(Myanmar)
[09/22/19] Bangkok သံုး ေစ်းဝယ္ English စာ လမ္းၫႊန္ 😜
စကား တစ္ခြန္း ကို က်ယ္က်ယ္ နဲ႔2ခါ ေျပာပါ
This One , This One
လက္ညိဳး နဲ႔ ထိုး ရင္းေျပာ ပါ
ဒီတိုင္း သြားေျပာ လို႔ ဘယ္သူမွ နားမလည္ပါ
ၾကားထဲက မလိုတာ ေတြ အကုန္ ျဖဳတ္ပါ
How much is this ?? သြားမလုပ္ နဲ႔ လက္ညိဳးနဲ႔ ထိုး
How Much ,How Much
ေစ်း ေျပာ ၿပီ / လက္ကား ေစ်း သိခ်င္ ရင္
Use , Many Many how much
Many Many == whole sale
ကိုယ္လဲ အဲ့ လိုပဲ bangkok ကို ေရာက္ ေတာ့
ေျပာတာ ေပါ့ အေသ /
သူက လဲ ျပန္ ေျပာ
သူကလဲ English စာအေသညံ
ေနာက္ဆံုး 10 min ေလာက္ ေျပာၿပီး တဲ့ အထိ
ကိုယ္ ဘာေျပာ ခ်င္လဲ သူကမသိ ေသး
သူ ဘာျပန္ေျပာ တာ လဲလဲ ကိုယ္မသိ
ေနာက္ဆံုး ဆိုင္က ထြက္လာေတာ့
" အာရံု ပါကြာ ဘာေတလာ ေျပာေနလဲမသိဘူးတဲ့ "
အဲ့ေတာ့မွ Ok သြား ေတာ့တယ္ 😂😂
Shop ေတြ နဲ႔ အလုပ္အေၾကာင္း ေတ ေျပာရတာ
စကား ျပန္ မေခၚပဲ ကြကိုယ္ အကုန္ လုပ္တာ
ကိုယ္ ကိုတိုင္ လဲ English လိုေရာ
Thai လိုေရာ မတက္ ေတာ့
လက္ေတ ေရာ ေျခေတ ေရာ ဖုန္းေတေရာ
အစံု အစံုပါတာ ေပါ့
ေနာက္မွ အကုန္သင္ေပးမယ္ ကြ 👍
567/456 Watergate Pavilion Building, 2nd Floor, Ratchaprarop Road, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400
Meow Logis บริการส่งสินค้า แพ็คสินค้า แทรกเอกสาร พื้นที่เก็บสินค้า สำหรับ SME www.meowlogis.com
Oak Slide On รถยกสไลด์ออนนนทบุรี รัต